Lychee any Thailandy " Journey-Assist - Vanim-potoana. Ahoana no hisafidianana? Price. Ahoana no ...
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Voankazo any Thailand » Lychee ao Thailandy
Lychee (anarana Thai no linchi)
Fotoana vitsivitsy lasa izay, lychee dia voankazo an-tany hafa tany Thailand. Navoaka avy any Sina ary arak'izany, tany Thailand dia namidy lafo kokoa noho ny voankazo teo an-toerana. Saingy nandritra ny fotoana ela, tany avaratr'i Thailand, dia ny toeram-pambolena maro no niseho, izay misy ankehitriny io voankazo mahaliana io. Lychee dia havan'ny voankazo mivantana toy ny longan и rambutan, ary toy ny longan dia matetika antsoina hoe mason'ny dragona. Ary amin'ireo firenena CIS matetika antsoina hoe lychees Plum sinoa.
Andramo ny Lychee
Lychee dia manana pulp matsiro, mandeha miaraka amin'ny tsiro ny voaloboka fotsy, apricots, voaroy. Mamy ny tsiro fa tsy mamy, misy tsirony mamelombelona.
Raha ny ivelany dia ny voankazo «lychee» matsiro misy marika mavokely somary marefo mamirapiratra mavokely manana ny habeny eo amin’ny 2-4 sm. Mofehy sy matevina ny felana. Malemy ny pulp, toy ny voaloboka, izay misy taolana lehibe miafina
Cost Lychee ao Thailand
Amin'ny vanim-potoana 35-40 baht isaky ny 1kg.
Any amin'ny toerana tsy mpizaha tany izay maniry ny lychee dia mividy efa ho dimy kilao isaky ny vanim-potoana 20 baht.
Vanim-potoana Lychee ao Thailandy
Maharitra manomboka ny volana jona ka hatramin'ny oktobra, fa noho ny fikajiana tsara ny lise dia azo jerena eny amin'ny talantalana mandritra ny taona.
Fomba fitahirizana lychee
Hiangona ao amin'ny lychee ao an-trano mandritra ny fotoana maharitra. 3-4 andro, ary ny voankazo dia hanomboka tsy ho hita intsony. Nefa misy fomba ahafahana manitatra ny fiainana rakotra an'io vokatra io in-droa heny.
Mandritra ny telo volana dia haharitra ny fiainana rakotra lychee raha esorina miaraka amin'ny sampana naniry izy (izany no fomba itahahan'ny Thais azy).
Toy izany koa, azo atao ny manitatra ny androm-piainan'ny lychee amin'ny alàlan'ny fametahana azy tsy mijanona (eo amin'ny hoditra) ao anaty tontolo misy haavo avo (65-75%) ary amin'ny hafanana +1 ka hatramin'ny 6 °.
Ao amin'ny endriky ny pulp, mba hamonjy azy dia afaka manafaka ihany ianao.
Ahoana ny fisafidianana lychee
Ny famantarana voalohany ny fahamatorana dia ny loko.
Ny loko mavokely marevaka dia manondro fahamasahana!
Ny mavokely mavokely sy ny mavokely mavokely dia manondro fahatsapana tsy fahatokisana.
Tint brownish manondro fa efa somary tara ny voankazo.
Tsy tokony ho naratra na simba ny hoditra.
Ny voankazo dia tokony ho somary elastika, toy ny hoe hipoaka. Ny voankazo dia tsy tokony ho malefaka na marefo.
Tsy tokony hisy fotsifotsy na bobongolo eo am-panaovana nazo lava tsara.
Ahoana ny fanadiovana lychee
Tsotra ny zava-drehetra eto:
Sasao tsara ilay lychee amin'ny rano mafana aloha.
Izahay dia manapaka ny voanjo manerana ny voankazo manontolo (manandrana tsy milentika lalindalina kokoa noho ny volony.
Ataovy fizarana ny ampahany iray amin'ny peel sy ny rehetra. Eo am-pelatananao tanteraka ny puloky. Ary ho an'ny sela sisa, dia mora ny mitazona lychee amin'ny tananao rehefa lany.
Miezaha tsy hanoritra ny voankazo, satria vonona foana ny hamoahana afo kely afangaro maloto izay voasasa tsy dia voasasa.
Any Thailand, ny lychees dia matetika ampiasaina amin'ny tsindrin-tsakafo amin'ny voan-dronono.
Ity voankazo ity dia mamono ny hetaheta ary azonao atao fotsiny ny manary azy miaraka amin'ny ranomandry amin'ny rano mineraly, ary hahazo zava-pisotro mamelombelona be dia be ianao Thai!
Mahasoa fananana lychee
Lychee dia antioxidant tena matanjaka noho ny fisiany ao amin'ny fandaharana azy. oligonola. Satria tena mahasoa ao anaty toetrandro mafana ity voankazo ity, ka manohitra ny otrikaretina sy ny katsentsitra isan-karazany.
Ny vitamina C ao anaty lychee dia avo roa heny noho ny otrikaina mitovy amin'ny voankazo voasary (71mg isaky ny 100g, mifanohitra 35mg isaky ny 100g). Ny lychee 100 grama ara-bakiteny dia afaka mandrakotra ny filan'ny olombelona isan'andro an'io otrikaina io. Fa ny vitamina C no tompon'andraikitra voalohany amin'ny hery fiarovantsika sy ny fanoheran'ny vatana ireo aretina isan-karazany.
Ny fihinana lychee dia tsara ihany koa amin'ny famelomana sy ny fiarovana ny hoditra amin'ny masoandro.
Ny be dia be amin'ny potasioma ao amin'ny lychee dia mahasoa ireo olona mijaly amin'ny aretim-po, na tsara, na fisorohana ireo aretina ireo.
Ny fampiasana ara-dalàna ny lychee dia manetsika tanteraka ny tosi-drà.
Ny asidra folika misy ny voankazo dia ilaina rehefa manomana ny fitondrana vohoka ny ray aman-dreny roa tonta, ary efa mivantana rehefa mitondra olona salama ho avy. Ambonin'izany, ny lychee dia ilaina ihany koa amin'ny lahatsoratra hafa ho an'ny vehivavy bevohoka, satria manampy amin'ny fitazonana endrika iray, manatsara ny feo ary manatsara ny toe-po! Ny zava-dehibe indrindra eto dia ny tsy fanararaotana azy io.
Inoana fa tena mahasoa amin'ny diabeta ny lychee. Ary raha mandany voankazo lychee 5-10 isan'andro ianao dia manomboka miverina amin'ny laoniny ny haavon'ny siramamy.
Amin'ny fitsaboana nentim-paharazana any Thailandy sy Azia amin'ny ankapobeny, Lychee dia mazoto amin'ny fitsaboana amin'ny aretina amin'ny havokavoka, voa ary atiny.
Ny Lychee dia aroso ihany koa ho an'ireo manana kolesterola avo, atherosclerosis, aretin'ny gastrointestinal, anemia ary anemia.
Eo ihany koa, vokatra tsara ho an'ny sakafo ity, ho an'ireo maniry hitazona ny lanjany tsara, na maniry maniry toy izany.
Ary farany ... Lychee, matsiro ihany!
Araka ny fikarohana sasany dia tsy tokony hanararaotra lychee ny ankizy. Raha mihinana be loatra ianao, dia mety hihena ny siram-ra. Noho izany, voalaza fa ny ankizy dia mametra ny tenany amin'ny 5 voankazo isan'andro, na manampy azy ireo amin'ny voankazo hafa. Na izany aza, ny olon-dehibe ihany koa dia tsy tokony hihoatra ny lychee. Mahasoa fa raha manaraka ny fepetra ianao.
Ary koa, mandritra ny fitondrana vohoka dia tsy tokony handalo an'ity voankazo ity ianao. Voankazo marobe isan'andro, ary tsara ho anao ny mahazo izay rehetra ilainao aminy.
tsy voalaza ny mampiasa lychees tsy mazoto (maintso-maintso fotsiny), satria mora mandratra ny vavony mahasosotra izany.
Raha tsy izany, ny lychee dia tsy misy contraindications. Saingy, toy ny voankazo hafa rehetra, ny olom-pantatra dia tsikelikely. Misy foana ny tsy fandeferana ny iray amin'ireo singa ao anatin'ity voankazo matsiro ity.